Zvinoreva zveMweya zveShiri muBhaibheri Zvinomiririra, pamweya - Zvinoreva Zvemubhaibheri
chirongwa chakanakisa chefoni imwe chete 2016
data vhiri rinotenderera pamba skrini
maitiro ekugadzirisa asina kujeka mapikicha pane iphone 6 plus
Zvinoreva zveMweya zveshiri muBhaibheri
Iwe uchawana shiri mune dzekare dzekare dzeanenge ese tsika. Ivo vari kwese kwese muBhaibheri - kubva pakutanga kusvika pakupedzisira.
Asi ichokwadi - kana ukatarisa, uchavawana. Mwari anosimuka pamusoro pechiso chemvura munaGenesisi, iyo Talmud inoratidza, kunge njiva. Shiri dzinorira munyama yechikara chakakundwa muApocalypse. Ndiyo mari yengoni - shiri dzechibairo. Vanouya nechingwa kuvaporofita.
Abrahama anofanira kuvavhundutsa kubva pachipo chake, uye njiva inoenda naJesu pakushanya kwake kwekutanga kutembere. Mwari ishiri inotakura vana veIsrael pamapapiro avo - shiri yatichatizira pasi peminhenga.
Anobvunza vateereri vake kuti funga shiri. Ndinozvida nezvake. Anoti izvi zvinogona kutitadzisa kunetseka. Pamwe isu hatidi mishonga, mushure mezvose, pamwe tinogona kudzikira, kuteerera nekutarisa shiri.
Muna Mateo, Jesu anoti: Fungai shiri dzedenga.
Saka, usatya; Iwe uri nani kupfuura shiri diki zhinji. Mateu 10:31
Shiri dzagara dzichindibata. mavara avo akanaka uye akasiyana; hushoma hwayo uye, panguva imwechete, simba rayo. Mushure mese dutu muhupenyu hwangu, ndinogara ndichifunga runyararo rwandinowana mune shiri nziyo. Makore mashanu apfuura, pandakagara muWashington, United States, mhuri yedu yakanga ichirwadziwa zvikuru.
Shiri dzakagara dzichikurudzira fungidziro yemunhu. Kubhururuka kwayo kunoratidza rusununguko uye bato kubva kuzvinhu zvepanyika.
Pakati peshiri dzinoonekwa semucherechedzo muBhaibheri, yekare pane njiva. MuTesitamende Yekare inoratidzika semucherechedzo werunyararo nekuti yakaunzira Noa mucheka wemuorivhi sechiratidzo chekuti mafashama apera. Zvinomiririra zororo (cf Mapisarema 53: 7) uye rudo (cf. Imbirai 5: 2)
MuTesitamende Itsva njiva inomiririra Mweya Mutsvene, Munhu Wechitatu weTiriniti Tatu (cf. Kubhabhatidzwa kwaJesu, Ruka, 3:22). Jesu akataura nezve njiva sechiratidzo chekureruka nerudo: Cf. Mateu 10:16.
Mune hunyanzvi hweKereke yekutanga, njiva yaimiririra VaApostora nekuti vaive zvishandiso zveMweya Mutsvene uye zvakare vakatendeka nekuti mukubhabhatidzwa vakagamuchira zvipo zveMweya vakapinda muAreka nyowani inova Chechi.
Gondo rine zvarinoreva zvakasiyana mukufananidzirwa kweBhaibheri. Dheuteronomio 11: 13 inorinyora seshiri isina kuchena, asi Mapisarema 102: 5 ine imwezve maonero: Hupenyu hwako huchaitwa hutsva sehwegondo. VaKristu vekutanga vaiziva ngano dzekare umo gondo rakamutsidzira hujaya hwaro nekuzvikanda katatu mutsime remvura yakachena. MaKristu vakatora gondo semucherechedzo werubhabhatidzo, sosi yekumutswazve neruponeso, umo iyo neophyte inonyura katatu (kuitira Utatu) kuwana hupenyu hutsva. Gondo zvakare mucherechedzo waKristu nehunhu hwake hwehumwari.
Gondo chiratidzo cheMusande Johane Muvhangeri >>> nekuti zvinyorwa zvake zvakakwirira zvekuti vanofungisisa chokwadi chakakwirira kwazvo uye zvinonyatsoratidza huMwari hwaIshe.
Inomiririra kukara, kufarira kupfuudza zvinhu. Inooneka muBhaibheri kakawanda.
Jobho 28: 7 Nzira iyo shiri inodya isingazivi, kana ziso regora harioni.
Ruka 17:36 Ivo vakati kwaari, 'Kupi Ishe?' Akapindura, `` Pose pano mutumbi, ndipo pachaunganira magora.
Gunguwo mucherechedzo wemaJuda wekureurura uye kutendeuka. Inoonekwa muBhaibheri mune akasiyana mamiriro:
Genesisi 8: 7 uye akasunungura gunguo, iro rairamba richienda nekudzoka kusvikira mvura yaoma panyika.
Jobho 38:41 Ndianiko anogadzirira gunguo zvokudya, kana vana varo vachichema kuna Mwari, kana vachitambanudzira zvokudya zvavo?
Isaya 34:11 Zvikuruva negora richagara nhaka, ibizi negunguo zvichagaramo. Yahveh achaisa pamusoro pake rwodzi rwokuyeresa rwenyonganiso uye nemwero wekusava nematuro.
Zefania 2:14 Zizi richaimba pahwindo, negunguo pachikumbaridzo, nekuti musidhari wakadzurwa.
Kure nekuva gwara sezvo richimiririrwa nevanhu vazhinji, huku inoshinga kudzivirira nhiyo dzayo uye kutomupa hupenyu hwayo. Jesu Kristu akafanana nehuku inoda kuunganidza isu tese nekupa hupenyu hwayo. Asi havazi vese vanoda kugamuchira ruponeso. Ndokusaka achichema achiti: Jerusarema, Jerusarema, iwe unouraya vaporofita nekutaka nematombo avo vakatumwa kwariri! Kangani kandakada kuunganidza vana vako, sehuku inounganidza hukwana dzayo munyasi memapapiro, asi iwe usingade! Mateu 23:37.
Jongwe mucherechedzo wekusvinura uyezve chiratidzo cheMusande Peter uyo akaramba Jesu katatu…
Johane 18:27 Petro akarambazve, uye pakarepo jongwe rakarira.
Jobho 38:36 Ndianiko akaisa uchenjeri mukati memaobvu? Ndiani akapa jongwe njere?
Muhunyanzvi hweByzantine neRomanesque, peacock chiratidzo chekumuka nekusaora (Saint Augustine, Guta raMwari, xxi, c, iv.). Chaivewo mucherechedzo wekudada.
Sekureva kwengano, hura yakamutsa vana vake vakafa nekuzvikuvadza nekuvamwaya neropa rake. (Cf. SAN ISIDORO DE SEVILLA, Etymologies, 12, 7, 26, BAC, Madrid 1982, peji 111). Kristu, segora, akavhura rutivi rwake kuti atiponese nekutipa chikafu neropa rake. Ndokusaka hura hunowoneka muhunyanzvi hwechiKristu, mumatabhera, maaritari, makoramu, nezvimwe.
Pamwe chete nedzimwe shiri dzakawanda, gora rinoonekwa serisina kuchena munaRevhitiko 11:18. Jesu aionekwawo seasina kuchena. MaKristu ekutanga vakatora gora sechiratidzo chekuregererwa nekuregererwa.
Dzimwe shiri dzaishandiswa sezviratidzo, kunyanya muMiddle Ages.
Kubhururuka kweshiri kwakanakisa
Chinyoreso chitsva chinogona kukura mumasvondo maviri - icho chinogona zvakare kubviswa. Shiri zhinji dzave pedyo nekutsakatika. Pasina simba revanhu (kuparadzwa kwenzvimbo, shanduko yemamiriro ekunze), mwero unotarisirwa wekutsakatika kweshiri unenge wakakomberedza mhando imwe muzana muzana.
Mimwe mishumo inoti tiri kurasikirwa nemarudzi gumi pagore.
Tichifunga kuti shiri dzinogona kutikurudzira kumanikidza mamwe maitiro ehunhu. Kana, sezvakanyorwa naEmily Dickinson, Tariro ndicho chinhu chine minhenga, unogona kufunga kuti tichava nechido chekuchengeta vari vapenyu.
Zvinorevei Kana Iwe Uchirota Nezve Kurwisa Mumwe Munhu
Ini Ndogadzira Sei Memoji Pane Yangu iPhone? Hechino Chokwadi!
Yangu iPhone Inoti Hapana Sevhisi. Heino Iyo Chaiyo Kugadzirisa!
Nei Yangu iPhone App Chitoro Isiri Kushanda Kana Blank? Heino Kugadzirisa!
Nhema Butterfly Zvinoreva
Akanakisa ePadesi Mhosva dze 2020
Iyo MyAT & T App Haisi Kushanda Pane Yangu iPhone! Heino Chaicho Kugadzirisa.
Nei iPhone yangu ichiti hapana SIM kadhi? Heino mhinduro yekupedzisira!
Yangu Sprint App Isiri Kushanda Pane iPhone? Heino Kugadzirisa!
Apple News haisi kurodha? Heino mhinduro!
Ini ndinowedzera Sei Chikwama Kudzora Center Pane An iPhone? Heino Kugadzirisa!
Ndingaite Sei Ini Kudzima Wrist Kuonekwa Pane Apple Watch? Iyo Kugadzirisa!
Yangu iPhone Haizarira! Heino Chikonzero Chaicho Nei.